नाबालिका बलात्कारको आरोपमा समाजवादी पार्टीका युवा नेता श्री सुब्बा पक्राउ – Makalukhabar.com
२०७७ श्रावण २७, मंगलवार १०:१२
लकडाउनका बेला डिएसपी न्यौपानेलाई खुट्टै टेक्न नसक्ने गरी…
मकालु खबर	 २०७७ जेष्ठ २४ गते 0
‘चिनियाँ मिडियाले सच्यायो ‘सगरमाथा नेपालकै हो’
मकालु खबर	 २०७७ बैशाख २८ गते 0
सीमा विवाद : अबको विकल्प कूटनीतिक वार्ता कि अन्तर्राष्ट्रिय…
मकालु खबर	 २०७७ जेष्ठ ९ गते 0
जसपालाई सूर्य थापाको जवाफ- अपसंस्कारको प्रदर्शनबाट कहाँ पुगिन्छ ?
‘नेकपा गम्भिर आइसोलेसनमा गएको हो त ?’
नाबालिका बलात्कारको आरोपमा समाजवादी पार्टीका युवा नेता श्री सुब्बा पक्राउ
मकालु खबर	 May 21, 2020 मा प्रकाशित 0
धरान । तत्कालिन संघिय समाजवादी पार्टीका युवा नेता श्री सुब्बा नाबालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले आज उनलाई बालिका बलात्कारको केसमा पक्राउ गरेको हो । उनलाई इप्रका धरानले साँझ ६ बजे धरान १३ स्थित सारंगा जाँदै गर्दा बाटाेबाटै पक्राउ गरेकाे हाे ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले बालिकाकी आमाले दिएको उजुरीको आधारमा श्री सुब्बालाई पक्राउ गरीएको बताए । प्रकाउ परेका सुब्बा समाजवादी जनता दल सम्बद्ध युवा संगठनका प्रदेश १ का अध्यक्ष हुन् ।
‘उनलाई एक नाबालिका बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ गरीएको हो । बालिकाकी आमाले गत ५ गते उजुरी परेपछि खोजतलासको क्रममा थियौं, आज यसलाई धरान–१३ स्थित सारंगा डाँडाबाट पक्राउ गरीएको हो ।’ इप्रका प्रमुख डिएसपी न्याेपानेले बताए ।
बलात्कृत ८ वर्षिय ती नाबालिकाले आमालाई विगत १०–१२ दिन देखि आफु माथि भएको घटना बताएपछि आमाले जेठ ५ गते इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले यस अवधिमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नै ल्याएर श्री सुब्बालाई पक्राउ गरेको हो । इप्रका प्रमुख न्यौपानेले उसलाई भोली म्याद थप्न अदालत लैजाने बताए ।
उनी राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी गर्ने, उद्याेगी ब्यापारी थर्काउने कार्यमा जाेडिने गर्दथे । धरानमा चन्दा उठाउने, उद्याेगी ब्यापारीलाई थर्काउने, धरानका विभिन्न पसल तथा हाेटल रेष्टुरेन्टमा खाएर पैसा नतिर्ने काण्डमा पक्राउ परेका सुब्बालाई प्रहरीले पटकपटक पक्राउ गर्ने गर्दथ्याे ।
श्री सुब्बा धरानकाे संघिय समाजवादी पार्टीकाे युवा नेता भएकाेले उनलाई कुनै केसमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा समाजवादीकै नेताहरू छुटाउन लाग्ने गरेका थिए । यिनी यस अघि प्रहरीलाई नै अभद्र ब्यवहार गरेकाे काण्डमा परेका थिए ।
मकालु खबर 650 खबरहरु0टिप्पणीहरू
के त्यो दुर्व्यवहार यति सस्तो थियो र ?
११ घण्टा बितिसक्दा पनि उठेन शव, अस्पतालको लापरबाही भन्दै क्षतिपूर्ती माग